SIDA CIRRIDKA AYAA BACRIMIYA DIGAAG. NOOCYADA HABKA DHALMADA IYO BACRIMINTA UKUNTA - BEERAHA DIGAAGA
Sidee wejiyada cirridka (bacriminta) digaag
In digaagga taranta, su'aasha bacriminta ay tahay asalka. Iyada oo aqoonkani, xitaa beeraley novice ah ayaa awoodi doona inay xisaabiyaan taariikhda qiyaasta ee sugitaanka faraca iyo tirada shimbiraha loo baahan yahay hawlaha ganacsiga. Aynu eegno dhammaan waxyaabaha ka soo horjeeda geedi socodka digaagga taranta.
Dhammaantood waxay ku bilaabmaa marka la galo, marka ragga da'doodu u dhaxeyso 24-26 toddobaad.
Ma taqaanaa? Waxaa jira jinsi madow habeenkii, kurye - Ayam Chemani (Indonesia). Intaa waxaa dheer, dhammaan cayayaanka, oo ay ku jiraan lafaha, sidoo kale waa madow, xitaa dhiigga shimbiraha sida aad u madow.
Beertu waxay wareegsan tahay digaag, waxay hoos u dhigtaa garbaha waxayna ku xirtaa caanahooda. Waxaa intaa dheer, waxaa jira calaamado kale oo taxaddar ah (tusaale ahaan, wadaagista boobka). Waxaas oo dhan waxay dhacaan haddii digaagga uusan daadin.
Ka dib markaan ciribtiro, cirridka "taraamijada" midka la doortay, taas oo ah, dusha sare ee dusheeda, oo isku dayaya inuu helo godka saxda ah, oo ku xiran gogo xagga dambe ee madaxa. Ma muuqato sida jaceylka ah.
Baro naftaada noocyada digaagga caanka ah sida digaagga Shiinaha, Ayam Zemani, Bielefelder, Foxy Chik, Kuban Red, Indokury, Hubbard, Amrox, Maran, Master Gray, Lohman Brown, Redbro, Wyandot, Sussex, iyo Faverol
Nidaamku wuxuu soconayaa waqti aad u gaaban isla markaana soo noqnoqda badiyaa inta lagu jiro maalinta. Marka la eego, hoggaamiyaha baakadka wuxuu la xiriiri karaa qof kasta markuu doono.
Waa muhiim! Anomaly waxaa loo tixgeliyaa haddii tirada falalka galmoodka ah inta lagu jiro maalintii ay gaarto 22 jeer.
Qaababka habka bacriminta
Inta lagu jiro labka iyo dheddig-xuubka dhiska (qaybta hoose ee xiidmaha), ciddiyaha ayaa leexday, qanjidhada qarsoodi ah. Dheeraad ah, waxay u gudubtaa gabdhaha gabadhu googoynta xubinta taranka waxayna xajisaa dhaqdhaqaaqa illaa 3 asbuuc. Ukunta la dhigay xilligaan xilligaas ayaa la bacrin doonaa.
Ukunta waxaa loo sameeyaa maalin walba digaagga digaaga, waxaana loo tixgeliyaa inay tahay unug ukun ah. In oviduct waxay u guurto cloaca si ay ula kulmaan abuur ah, kaas oo galaya gudaha iyada oo qolof jilicsan. Ka dib 24 saacadood, qolofku wuxuu noqdaa mid adag, wuxuu isu rogaa qolof, ukumana soo baxo.
Sidee loo baadhi karaa ukumaha jeermiga guriga
Sida aad ogtahay, ma aha ukun kasta oo la dhigo hoostiisa hoostiisa. Haddii aysan jirin wax embriyaha ah gudaha, markaa ma jiri karto hadal ku saabsan ilamaha. Jiritaanka jeermiska ukunta waxaa lagu gartaa joogitaanka xinjir dhiig oo ku jira qajaar, oo ku iftiiminaya laydh. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalab gaar ah - qoyaan.
Baro waxa qoorta ku jira iyo sida loola xiriiro ukumaha ovoskopirovat.
Nidaamka waxaa lagu fuliyaa qol mugdi ah. Iyada oo leh caarad qaro leh, ukunta waa in lagu tilmaamaa ilaha iftiinka. Dhaji sheyga dhajinta, sidaas darteed way sahlan tahay in la eego waxyaabaha ku jira. Haddii aad aragto aag yar oo leh xididdada dhiigga, ka dibna ukunta ayaa la bacrimiyey.
Waa muhiim! Ukumaha Brown waa mid aad u adag in la iftiimiyo, sidaa daraadeed, waxaa haboon in la doorto mid cad oo loogu talagalay in wax laga qabto.
Haddii aysan jirin xinjiro iyo dhibco ku jira jooniska, laakiin waxaa jira dhiig xinjir leh, tani waxay muujinaysaa dhimashada embriyaha. Ukunta noocan ah waa la tuuri karaa, waa inaadan sugin digaag ah.
Imisa qofood oo digaag ah oo roodle ah
Waa wax qarsoodi ah in dad badan oo rukunka ah ee xirmada ay hubaal ahaan ula dagaalamayaan dumarka. Sidaa darteed, hoggaamiyaha kooxda oo dhan ayaa sidoo kale lagu go'aamiyey. Haddii uu jiro hal lab ah, waxaa jira dumar badan, markaa wax dhibaato ah ma jiri doonto. Intaa waxaa dheer, si ay digaagga loo tixgeliyo hoggaamiyihiisa, waxaa lagama maarmaan ah in aan ku beeri karayn coop digaag, laakiin si ay u aragto hoggaamiye mustaqbal.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato sababta ay digaagga u qaadaan ukun yar, sababta digaagga ma u qaadaan ukumaha, sababta digaagga ukunta.
Tirada ugu wanaagsan ee digaagga ee hal shineecadu waa 10-12 unug. Baakada waa inaanay ka badneyn labo rag (dhalinyaro iyo da '). Haddii aan carruurtu qorshaysanayn, markaa uma baahnid "inseminator". Waxaa si fudud loo xakameyn karaa mudo cayiman oo dheddig ah.
Ma taqaanaa? Waxaa jira kiis la yaqaan markii uu cirridku weli noolaa 12 bilood bilaa madax (1945). Dhamaan xaqiiqda ah inuu ka tagay saldhigga maskaxda iyo dhegta.
Habka bacriminta ee digaagga waa shaki ka duwan xayawaanka kale. Duufaanku wuxuu diyaar u yahay in uu shaqeeyo wax ka badan hal jeer maalintii, haddii dhedigtu aysan daadin. Wuxuu u eg yahay gentleman run ah, wuxuu la wadaagaa raashinka shakhsiga uu jecel yahay, qoob ka ciyaara ee ku hareereysan iyada oo keliya kaddib marxaladaha kala duwan ee flirtu si toos ah u tagaan si isdaba-joog ah.
Mudo 20 cisho gudahood ka dib falgalka, hen waxay ukun kartaa ukumaha bacrimiya, oo si fudud loo go'aamiyo joogitaanka xinjirta xajiyaha ee raajada. Xasuusnow, si aad si guul leh u daaqsato adhiga adhiga, waa in aan ka badnayn laba rag ah da'dooda kala duwan iyo ugu yaraan 10 dheddigba midkiiba "inseminator".